ညကြီးထဲ ... Making imitation of night
ညအတု လုပ် လုပ်နေရတာ ခက်တယ် ... In the night is not good.
လရောင်နဲ့ ငါ The Moon - beam and I
ငါနဲ့ လရောင် Hunger for each other
အပြန်အလှန် ငတ်မွတ်ကြ .... The four man inanarrow room
အခန်းကျဉ်းလေးထဲ လူက လေးယောက် Dream catching noise go '' click - click "
အိမ်မက်ချင်း ချိတ်မိ ငြိမိသံ တကျိကျိ I couldn't sleep the whole night.
ညက ... အိပ်မရဘူး ...၊
စိတ်အကင်းတို့ တဖျောဖျောကြွေရာ On the narrow bed
အိပ်ရာ ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲ Where my new thoughts are fallen
မနက် မနက်ဆို ... နှိုးစက်က Every morning
´´ ဟင်္သာကိုးသောင်းဇာတ် ´´ ပဏာမတီးလုံးနဲ့ လှုပ်နှိုး My alarm - clock wakes me up
ဆင်ကျီစားရာ ကွင်းထဲက ဆိတ်များ With the introductory music of
ဦးချိုရ မြင်းများ '' The 90,000 Brahminy ducks story"
ရေမြွေတွေလို ... Writhing and struggling
လူးလွန့် ၊ ပွတ်တိုက်၊ ငုပ်လျှိုး 12 work hoursaday
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရုန်း The irises in the center of wounds
တစ်နေ့အလုပ်ချိန် (၁၂)နာရီ The standards of the understanding of fair price
ဒဏ်ရာအလယ်ဗဟိုမှ မျက်ဝန်းများ Labour
တန်ရာတန်ကြေး နားလည်မှု စံနှုန်းများ Time
လုပ်အား ... Whistling to theft
အချိန် .... Sometimes I show my pleasure
ခိုးဝှက်ခြင်းကို လေချွန်ပြီး ကြည်ဖြူပြလို ပြရ I tease my danger
အန္တရာယ်ကို ... ထိပ်ပုတ် ခေါင်းပုတ် Epidemics
ကျီစယ်ရ Illegal stay
ကူးစက်ရောဂါများ Knowledge is poor
တရားမ၀င် နေထိုင်ခြင်းများ Without knowledge is poor, too
ဒီမှာတော့ .... The tragic story
သိခြင်းကလည်း ဆင်းရဲ Borrowing the bosom of Nepolean
မသိခြင်းကလည်း ဆင်းရဲ .... Show oneself with the bad poor habit
ဒူးနဲ့ မျက်ရည် သုတ်ရတဲ့ဇာတ် Inanoisy and frivolous manner
နပိုလီယန် ရင်ဘတ်ကြီး ငှားငှားပြီး Sure...
We were bad persons
လူလုံးပြတတ်တဲ့ အရိုးစွဲ ခပ်ညံ့ညံ့ ဥာဉ် နဲ့ We reject wrong questions
ဟေးလား ၀ါးလား .... Every now and then
သေချာတယ် ကျွန်တော်တို့ တကယ် ညံ့ခဲ့ကြရပြီ ....၊How long has it been ?
Calling or Overstay
မေးခွန်းအမှားတွေပဲ ပုတ်ထုတ်နေရ How much have we sent ?
ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ When do you come back ?
ကောလင်းလား .... အိုလား What are you doing in Malaysia ?
ဘယ်လောက် ပို့ပြီးပြီလဲ When you return to Myanmar ?
ဘယ်တော့ ပြန်မှာလဲ What will you do ?
မလေးရှားမှာ ဘာလာလုပ်တာလဲ They fail exam
မြန်မာပြည်ရောက်ရင် ဘာလုပ်စားမှာလဲ With their question
? ? ? ? ? ? I WANT TO BE POET.
စာမေးပွဲ ကြသွားကြတယ် Translated by Mg Nyi-Nyutt
ကျွန်တော် .... ကဗျာဆရာ လုပ်မှာပါ .... ။
Posted by thuhtethmu at 5:27 AM No comments:
မျက်နှာဝှက်ကာ ကျွန်တော်နေသည် ... ၊
မရိဘဲ ဆွေး ...
လူတို့ဇာတ်မှာ .... ။
မျက်နှာဝှက်ကာ ကျွန်တော်နေသည် ...၊
ပန်းတို့ဇာတ်မှာ .... ။
Posted by thuhtethmu at 12:16 AM No comments:
“ မိမိကိုယ်ကို မိမိ ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ခြင်းသည် အခြားတစ်ပါးသောသူကိုလည်း စောင့်ရှောက်သည်မည်၏ ” .... တဲ့ ။ ဒီအဆုံးအမစကား ဟာ ဓမ္မပဒလာ ဗုဒ္ဓ ရဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးသော စကားပါ။ ကျွန်တော်တို့တတွေ ရှင်သန်နေထိုင်ကြတာဟာ ဗုဒ္ဓ ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာပါ။ ဗုဒ္ဓ ရဲ့အဆုံးအမတွေကို ဘယ်လောက်ထိ လိုက်နာကျင့်သုံး စွမ်းဆောင်နိုင်ကြပြီလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မေးကြည့်ကြဖို့ မသင့်ပေဘူးလား။ ဒီတော့ အရင်ဆုံးက မိမိကိုယ်ကို မိမိ စိစစ်ဝေဖန်သုံးသပ်မိပါတယ်၊ ငါကိုယ်တိုင် ဘယ်လောက်ထိအောင် အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အခြေအနေအထိ စောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီးပြီလဲ ... ၊ ဆိုတာကနေပြီး စလာတဲ့အတွေးက သည်ဆောင်းပါးလေးကို ရေးဖြစ်ခဲ့တာပါပဲ။
အကောင်းဆုံး ... လောကမှာ အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ကြတဲ့ စံချိန်စံညွန်း တန်ဖိုးထားမှုပေတံတွေ သူ့နေရာနှင့်သူ အမျိုးမျိုးအထွေထွေ ကွဲပြားခြားနားကြမှာပါ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဗုဒ္ဓ ရဲ့အလိုကျ အကောင်းဆုံး“ စံ” ကိုပါ။ ဘာကို အကောင်းဆုံးလို့ ခေါ်မလဲ၊ ဘယ်လိုစိစစ်ရွေးချယ် ကျင့်ဆောင်မလဲဆိုတာ အရင်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စပါ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကို ရှာဖွေစူးစမ်းရာမှာ ... An approach to truth အမှန်တရားကို ချဉ်းကပ်မိဖို့နဲ့ An enbodiment of truth အမှန်တရား ကိန်းဝင်တဲ့ ဥာဏ်ပညာရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ... ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်ကို ဥာဏ်ပညာရှေ့သွားသော၊ ဥာဏ်ပညာနှင့်ယှဉ်သော ရှာဖွေမှု လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေကိုလည်း မြတ်စွာဘုရားက နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ပြဆိုညွှန်ကြားပြီးသားပါ။
' Do not accept anything based upon mere reports, traditions or hearsay,
Nor upon one's own speculative opinions,
ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာသည် မည်သည့်အရာကိုအဆို သေသေချာချာ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းမပြုဘဲ မယုံကြည်ရန် ကာလာမသုတ္တန်၌ ...
သတင်းစကားကြားယုံမျှဖြင့်လည်းကောင်း၊ အစဉ်အဆက်စကားမျှဖြင့်လည်းကောင်း (သို့မဟုတ်) ဤသို့ဖြစ်ဖူးသတတ်ဟူသော စကားမျှဖြင့် လည်းကောင်း မည်သည့်အရာကိုမျှ ဟုတ်မှန်သည်ဟု လက်မခံပါနှင့်၊ ဘာသာရေးကျမ်းဂန်များနှင့် ညီညွတ်ပါပေသည်ဟူ၍လည်း လက်မခံပါနှင့်။ အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်ရုံမျှဖြင့်၊ ဆွေးနွေးငြင်းခုံရုံမျှဖြင့်လည်း လက်မခံပါနှင့်။ မိမိကိုယ်တိုင် ကောက်ချက်ချပြီးတော့လည်း မယုံပါနှင့်။ မှန်လှပြီဟု ထင်ရကာမျှဖြင့်လည်း လက်မခံပါနှင့်ဦး။ မိမိကိုယ်တိုင် ကြံစည်မှန်းဆ ထင်မြင်ပြီးတော့လည်း မယူပါနှင့်။ အခြားသူတစ်ဦး၏ ထင်မြင်ရသော စွမ်းရည်သတ္တိဖြင့်လည်း လက်မခံပါနှင့်ဦး။ ငါတို့ဆရာဖြစ်ပေသည်ဟု ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့လည်း လက်မခံပါနှင့်ဦး ....
'But, when you know for yourselves that certain things are unwholesome and bad: tending to harm yourself or others, reject them
'And when you know for yourselves that certain things are unwholesome and good: conducive to the spiritual welfare of yourself as well as others, accept and follow them'.
''သို့သော် အချို့သောတရားတို့သည် မကောင်းသော အကုသိုလ်တရားတို့တည်း၊ သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် သူတပါးတို့အား ထိခိုက်နစ်နာစေတတ်သော တရားတို့တည်းဟု သင်ကိုယ်တိုင် သိမြင်လာသောအခါ ထိုတရားကို ပယ်ပါလော့။
ထို့နောက် အချို့သောတရားတို့သည် ကောင်းမွန်သော ကုသိုလ်တို့တည်း၊ သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် သူတပါးတို့အား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုးချမ်းသာများကို ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်၏ဟု သင်ကိုယ်တိုင် သိမြင်လာသောအခါ ထိုတရားတို့ကို လက်ခံ၍လိုက်နာပါလော့ ... ”
မယာဆိုတာ ကိုယ့်မှာ အပြစ်ရှိလျှက် မရှိဟန်ဆောင်တာ ... ၊ သာဌေယျ က ... မရှိဂုဏ်ကို ရှိဟန်ဆောင်တာ ... ဒီတရား နှစ်ပါးဟာ အကုသိုလ်စေတသိတ် ၁၄ ပါးမှာ လောဘစေတသိတ်ထဲမှာ ပါပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို မိမိအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စောင့်ရှောက်ရာမှာ ဒီမာယာဆိုတဲ့လောဘစိတ်တွေ ဘယ်လောက်အသုံးချပြီး မိမိကိုယ်ကိုရော တခြားသူကိုကော ထိခိုက်နစ်နာစေခဲ့ပြီးပြီလဲ။
သာဌေယျတွေကကော ဘယ်လောက် တောင်လိုပုံပြီး နေခဲ့ပြီလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓ ရဲ့အဆုံးအမကို လိုက်နာကျင့်ကြံပြီး မိမိကိုယ်တိုင်ကိုရော၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုရော ဘယ်လောက်ထိ ကောင်းကျိုးပြုခဲ့ကြပြီးပြီလဲဆိုတာ အသေအချာ မေးဖို့ ကောင်းပါပြီ ...။ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရာမှာ ဒီတရားတွေကို ကျင့်ကြံလိုက်နာခဲ့ရင် ဘယ်အတိုင်းအတာထိ ဖွံ့ဖြိုးကောင်းမွန်လာနိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားချင့်ချိန်သင့်ပြီး ပြင်ဆင်သင့်ပြီလို့ တွေးမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကသာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓ အဆုံးအမမှာ တည်သူတွေလို့ မလိုရာမှာ လက်မထောင် ၀င့်ကြွားချင်ကြပြီး တကယ့်တကယ်တမ်းကြတော့ ဗုဒ္ဓ နဲ့ဝေးသူ၊ ဗုဒ္ဓ ကို အသရေ ဖျက်သူတွေများတဲ့နေရာမှာ နေရကြသလို သိခြင်းမှာ ဆင်းရဲခဲ့ကြရတာပါ။ ဥပမာလေးတစ်ခု ပြောချင်ပါတယ်။ စင်္ကာပူကိုတည်ထောင်ခဲ့သူ လီကွမ်းယုကလည်း ကျွန်တော် တင်ပြခဲ့တဲ့ ဓမ္မပဒလာ မိမိကိုယ်ကို မိမိကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ခြင်းသည် အခြားတပါးသောသူကိုလည်း ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ခြင်း မည်၏ဆိုတဲ့ အယူအဆကို အခြေခံပြီး စင်္ကာပူကို တည်ထောင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူပြောတာက တရုတ်ပညာရှိတစ်ဦးရဲ့ အဆိုအမိန့်လို့ ဆိုပါတယ်။ သဘောတရားခြင်းကတော့ အတူတူပါပဲ။ သူက သူ့ကိုယ်သူ အရင်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စောင့်ရှောက်ပြီးမှ တစ်ဆင့်ခြင်း မြှင့်တင်သွားတာပါတဲ့ ...။
ကျွန်တော်တို့ခမျာမှာတော့ “ယောက်မ” များလိုပါပဲ။ ဟင်းအိုးကြီးကို မွှေမွှေနေရတာနဲ့ပဲ အရသာမဲ့စွာ မသိသားဆိုးဝါးစွာ အောက်တကာ့အောက်ဆုံးကို ရောက်ခဲ့ရပါပြီ ...။ ကျွန်တော်တို့ သူတပါးမကောင်းတာတွေကို လက်ညှိုးထိုး ကဲ့ရဲ့နေမယ့်အစား ဗုဒ္ဓ ရဲ့အဆုံးအမကို မိမိကိုယ်တိုင် မိမိစိတ်မှာ ကိန်းဖို့ ကာလာမသုတ္တန်လာ စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ ကြိုးစားတည်ဆောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ....
ဆိုရင် ... ကိုယ်တိုင်မေးမယ့် မေးခွန်းတွေ မှန်ပါမှ ကျွန်တော်တို့ ဖြေရမယ့် အဖြေတွေ မှန်နိုင်မယ် မဟုတ်လား ။
Posted by thuhtethmu at 2:50 AM No comments:
ပန်းဖြစ်ကြောင်းလည်း ကိုယ်ရည်သွေး မပြချင်တော့ပါဘူး
ပန်းမှော်ရုံ ပန်းချီကားနဲ့ 
As I have no chance to blossom,
that I amaflower.
With my attitude toavirtuous person.
I've swallowed up pollen.
As I told in my youth,
I can't creat
A new floweraday
Not to be monotonous.
I have to treat
The picture of timber wood
And the rough rural dream
Thu Htet Hmu
Trans: by..Mg Nyi-Nyutt
Posted by thuhtethmu at 11:14 AM No comments:
ပန်းတို့ထွင်းတဲ့ရာဇ၀င် The history that is carved by flowers.
The history that is carved by flowers.
တစ်ဖူးမငုံ Ifabud won't do,
တစ်ဖူးငုံမည် Another bud will do.
တစ်ငုံမပွင့် Ifaflower won't do,
တစ်ငုံပွင့်မည် Another flower will do.
တစ်ပွင့်မမွှေး Ifaflower donesn't smell,
တစ်ပွင့်မွှေးမည် Another flower does.
ယုံကြည်သည်လေ I believe
သည်မြေဆီနှင့် To those flowers
သည်နေခြည်ကြား Blossom with brave hearts
တစ်ထောက်တစ်လျား Between this soil
မကြောက်တရားနှင့် ပွင့်သောပန်းများကို ... ။ And this sunglight.
သုထက်မှူး ( Translated by MAUNG NYI-NYUTT )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အာဇာနည်အမျိုးသမီးများသို့ ...,
Posted by thuhtethmu at 11:11 AM No comments:
” ခရမ်းရင့်ရင့်စိတ် ” " Deep Violet Mind "
” ခရမ်းရင့်ရင့်စိတ် ”
" Deep Violet Mind "
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ယုံကြည်လို့ As I believe love,
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပဲ ဖြားယောင်းခဲ့တာပါ I have deceive with love
ဒီအပြုံးတွေ .... Because I have blossomed abundantly
မထုံသင်းနိုင်ခဲ့ရခြင်းကလည်း This smiles do not make good scent.
ဖောဖောသီသီ ပွင့်ပြခဲ့ရလွန်းလို့ပါ။ Really, I do not know how to shoot.
အဟုတ် ... Ifabullet comes from me,
တကယ့်ကို ပစ်ခတ်ခြင်းအတတ်လည်း It is true that it penetrates my body.
ကန်းခဲ့သူ ... Until deep violet dark
ကျွန်တော့်ဆီကလာခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင်မှ Flows out from my chest
အဲဒီ ... ကျည်က ကျွန်တော့်ကို ဖောက်ထွင်းသွားခြင်းပါ။ I shut my mouth tightly
ခရမ်းရင့်ရင့် အမှောင်တွေ ... To unbelief.
ဟောဒီ ရင်ဘတ်ထဲက စီးကျမလာသရွေ့ Really,
မယုံကြည်ခြင်းတွေကို As I believe love,
နှုတ်ခမ်း တင်းတင်း စေ့ချင်တယ် ... I have deceive with love.
အဟုတ်ကို ... ( Translated by Maung Nyi-Nyutt )
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပဲ ဖြားယောင်းခဲ့တယ် ....။ ။
Posted by thuhtethmu at 11:06 AM No comments:
တစ်ခင်းလုံး ... အခါးတွေသီးတဲ့ရာသီ " " The season that fruits bitterness in the whole field "
" တစ်ခင်းလုံး ... အခါးတွေသီးတဲ့ရာသီ "
" The season that fruits bitterness in the whole field "
မနက် ... မနက်ဆို ... Every morning
ပဲပြုတ်နဲ့ ထမင်းဆီဆမ်းကို လွမ်းလို့ I long for boiled garden pea and oil rice
ချစ်သူ့လာရာလမ်းကလေးကို When I gaze at the land
လှမ်းငေးမိတဲ့အခါ ... Which my sweet comes on.
အဲဒီမှာ ... ပင်လယ် .... ။ There isasea.
ချစ်သူ့ .... အိပ်ခန်းမီးရောင်လေးအားကိုးနဲ့ Whenever I try to catch the light of night
ညကို အရောင်ဖမ်းဖို့ ကြိုးစားတိုင်း With the help of the dim light of her bed room,
မျက်ဝန်းထဲ ... ကောင်းကင် The sky is in my iris
ဝေးလိုက်တာ ... Too far
ပင်လယ် The sea
ကောင်းကင် The Sky
အလင်းနှစ် .... The light year
ငါ့အိပ်ရာ ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲ Except the dreams become wider and wider
အိပ်မက်တွေ ကျယ် ကျယ်လာတာကလွဲပြီး In my narrow bed
စိတ်ကူးနဲ့ နွေးရတဲ့ Even her hand that I warm in my imagination
ချစ်သူ့လက်ဖ၀ါးလေးတောင် ... Is not well,
၀င်ရိုးစွန်းရာသီဖွဲ့ ... ဖျားလို့ ... နာလို့ We have only to cae for our minds,
စိတ်ကို စိတ်ချင်း With sorrow each other
အလွမ်းနဲ့ စောင့်ရှောက်ကြရုံကလွဲပြီး Yours is broken for your own reason.
မင်းမှာလည်း မင်းအဓိပ္ပါယ်နဲ့ မင်း Mine is also become bits and pieces
ကျိုးလို့ ကြေလို့ ... ။ For my own translation.
ငါ့မှာလည်း ... ငါ့ဘာသာပြန်နဲ့ ငါ Like this
အပိုင်းပိုင်း ... အပြတ်ပြတ် .... Likeabeach
ဒီအတိုင်းပဲ .... Likeabus stop
ဆိပ်ကမ်းလိုလို The land we have to reach on
မှတ်တိုင်လိုလို Is become wrongly.
ဆိုက်ကပ် ဆင်းသက်ရာမြေလည်း ... Only the bitterness is fruited
အလွဲလွဲအချော်ချော်နဲ့ပေ့ါ In my whole bosom.
ရင်တခင်းလုံး ... အခါးချည်းသက်သက် သီးလို့ ပွင့်လို့ .... ။
( Translated by MG NYI-NYUTT )
Posted by thuhtethmu at 11:03 AM No comments:
ပန်းတို့ထွင်းတဲ့ရာဇ၀င် The history that is carv...
တစ်ခင်းလုံး ... အခါးတွေသီးတဲ့ရာသီ " ...